काँचो रुखबाट बिजुली ! | Aaja ko Shiksha
काँचो रुखबाट बिजुली !
रुकुम मुसीकोट नगरपालिका–५, सेरिगाउँमा रहेको मोर्डन रिसर्च कन्स्ट्रक्सन एन्ड कन्सल्टेन्सी प्रालिमा अध्ययनरत विद्यार्थीले रूखबाट १९ भोल्टेज क्षमता भएको विद्युत् उत्पादन गरेका छन् । प्राविधिक विषय अध्ययन गरिरहेका लेभल टु इलेक्ट्रिकल सब–ओभरसियर पढिरहेका विद्यार्थीले रूखबाट विद्युत् उत्पादन गरेका हुन् ।
तीन वर्ष अघिदेखि विभिन्न प्राविधिक तालिम सिकाउँदै विद्यार्थीले गुनामौरा नामको काँचो रूखबाट विद्युत् उत्पादन गर्न सफल भएका हुन् । विभिन्न वस्तुमा विद्युत उत्पादनको परीक्षण गर्दै जाँदा रूखबाट पनि विद्युत् उत्पादन भएको विद्यार्थीले बताएका छन् । विद्यार्थी जयबहादुर नाथले आफूहरूले लामो प्रयास पछि रूखबाट विद्युत् उत्पादन गर्न सफल भएको सुनाउनुभयो । धेरै काँचा रूखमा प्रयास गरिए तापनि गुनामौरा प्रजातिको रूखबाट मात्र विद्युत् उत्पादन भएको उहाँ बताउनुहुन्छ । गुनामौरा रूखको भित्री भागमा तामाको तार र रुखको बाहिरी आवरणमा फलामको तार राखेर कनेक्सन गर्दा १९ भोल्टेज बढी विद्युत् उत्पादन भएको हो । ‘धेरै दिनको मेहनत र प्रयासपछि काँचो रूखबाट पनि विद्युत् उत्पादन हुने रहेछ भन्ने कुरा पुष्टि भयो,’ नाथले भन्नुभयो, ‘धेरै रूखमा प्रयास गर्दा–गर्दा गुनामौरा रूखमा यो परीक्षण सम्भव भएको हो ।’
सब–ओभरसियर अध्यनरत लेभल टु इलेक्ट्रिकल विद्यार्थी खिमप्रकाश नाथले आफूहरूले विद्युत् उत्पादनका लागि फरक–फरक क्षेत्रमा अध्ययन गरिरहेको र रूखबाट विद्युत् उत्पादन हुनु पनि त्यसकै एउटा उपलब्धि भएको बताउनुभयो । यस अघिका ब्याचका विद्यार्थीको प्रेरणाले आफूहरूले विभिन्न वस्तुमा विद्युत् उत्पादन हुनेगरेको विषयमा अध्ययन गरिरहेको नाथको भनाइ छ । गत वर्षमा मात्रै सोही संस्थामै अध्ययनरत विद्यार्थीले आलु र स्याऊबाट विद्युत् उत्पादन गरेका थिए ।
यो वर्ष रूखबाट विद्युत् उत्पादन गरेर विद्यार्थीहरूले खोजीको सम्भावनालाई बढाइरहेका मुसीकोट नगरपालिकाका शिक्षा अधिकृत बिनाराम खड्काले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार विद्यार्थीहरुले यो पढाइले रोजगारीको ग्यारेण्टी पनि हुने भएकाले प्राविधिक शिक्षामा मोह बढेको हो । यस संस्थामा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूले हरेक वर्ष कुनै न कुनै नयाँ गर्ने गरेको संस्थाका कार्यकारी निर्देशक भुवन नाथले बताउनुभयो । विशेषगरी इलेक्ट्रोनिकका विविध विषयमा सिक्न आउने हरेक वर्षका विद्यार्थीले नयाँ सम्भावनाको खोजी गर्ने गरेको बताइएको छ ।